Maraykanka: Arday u xidhan inay iska diwaangeliyeen jaamacad aan jirin | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Maraykanka: Arday u xidhan inay iska diwaangeliyeen jaamacad aan jirin
Maraykanka: Arday u xidhan inay iska diwaangeliyeen jaamacad aan jirin
Hindiya ayaa dibad bax laga sameeyey ku aaddan Maraykanka, kaddib 129 arday oo indiyaan ah kolkii loo xidhay inay isdiwaangeliyeen jaamacado beenabuur ah oo ku yaal carriga Maraykanka.
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay yiraahdaan ardayda diiwaan gashani waa ay ogaayeen in adeeggani yahay mid sharcidarro ah.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Hindiya ayaa iyana dhankooda sheegaya in ardaydan laga yaabo in la khalday.
Sabtidii, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Hindiya (MEA) ayaa soo bandhigtay mudaaharaadka safaaradda Mareykanka ee Delhi, iyaga oo ku nuuxnuuxsaday xiritaanka iyo dalbashada ardadaasi xidhan.
Sida ay warisay warbaainta Mareykanka Jaamacaddan been-abuurka ah ayaa la dhisay sanadka 2015-ka si loogu tijaabiyo muwaadiniin ajnabi ah oo markii hore u safray Mareykanka iyagoo watay Visaha ardaynimo, waxayna rabeen inay joogaan dalka.
Bogga internetka ee Jaamacadda Farmington waxaa lagu muujiyey sawirrada ardayda fasallada iyo maktabadaha, mararka qaarna ardayda oo nasanaysa agagaarka jaamacadda.
Sidoo kale jaamacaddu waxay ku xayeysiisay waxbarashadda ardayda jaamacadda koowaad $ 8,500 (£ 6,500) sannadkii Waxa kale oo bogga Facebook si been ah ugu qorotay jaamacaddani taariikhda dhacdooyin aan jirin.
Laakiin waraaqaha maxkamadda ee la sii daayay todobaadkii hore ayaa muujiyay in shaqaalaha Jaamacadda Farmington ay ahaayeen wakiillo ka socday Hay’adda Socdaalka iyo Dhaqaalaha ee ICE. Sida oo kale halka jaamacaddu degganayd ay ahayd meel gawaadhida lagu xaraysto.
Xukuumadda Hindiya ayaa sheegtay in ardaydu laga yaabo in la dagay oo aanay kas isku diiwaangelin.
“Waxaannu ku boorrineynaa Maraykanka in ay nala wadaagaan faahfaahin buuxda iyo warbixinada joogtada ah ee ardayda. Si ay uga sii daayaan xabsiga ugu horrayn iyo in aysan ka welwelin tarxiilkooda,” ayay tiri Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Hindiya.
dadka qaar ayaa ku doodaya in Maraykanka dad bilaa dambi ah si kas ah uu u xannibay.
Dhanka kale, khadka telefoonka ee loogu talagalay ehelada walwalsan ee carruurtooda la xiray ayaa laga fogeeyey safaaradda Hindiya ee Washington, sida lagu sheegay wargeyska Times of India.
Safaarada Mareykanka ee Delhi ayaa xaqiijisay in ay heshay warqad ku saabsan dibad-baxa balse aysan jirin wax hadal ah oo dheeraad ah.
Labadii sano ee la soo dhaafay, maamulka Trump ayaa sidoo kale lagu xiray muhaajiriinta aan sharciga haysan iyo kuwa kormeerka ugu jira fiisaha dalkaas.
Previous articleBBC Maxay tahay sababta boqoradda Ingiriiska loo geeynayo meel ammaan ah
Next articleDeg Deg, Warkii Ugu danbeeyay ee Dilkii Agaasimihii Shirkada Dp World ee Boosaaso